भेन्टिलेटरवाट बाहिर आए कञ्चन, १७ दिन पछि आवाज निकाल्दा पनि लिए अनिषाको नाम (भिडियो हेर्नुस्) – Dainik Samchar
January 23, 2021 297
काठमाडौ । सामाजिक सञ्जालमा अहिले कञ्चन र अनिषाको बारेमा निकै चर्चा भएको छ । अस्पतालमा उपचारार्थ रहेका कञ्चन १७ दिन पछि बोल्न सक्ने भएका छन् । उनले आफुले भोगेको पी डा को बोरेमा अर्ध चेतमा केही बताएका पनि छन् । नेपालको कानुन अनुसार उनीहरुको प्रेम र विवाह गर्ने उमेर भएको थिएन । सानै उमेरमा प्रेममा परेका उनीहरुले विवाह त गरे तर त्यो विवाह लामो समय सम्म टिक्न सकेन ।
चितवनवाट काठमाडौ पुगेर कञ्चनको आमाको अगाडी विवाह गरेको भोलीपल्टै बेहुलीले आफ्नो माइतीको दवावमा कञ्चनलाई आफुले प्रेम नगरेको बताइदिइन् । उनलाई प्रहरी कार्यालय लगियो । प्रेमिकावाट अलग गराइयो । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
त्यसपछि उनीहरुको सम्बन्धमा परिवर्तन आयो । त्यो सबै अवस्थाको सामना कञ्चनले सहन सकेनन् । कोठामा फर्किएर वि ष खा ए । अहिले उनको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ । दुई साताको उपचार पछि होसमा फर्किएपछि कञ्चनको परिवारमा खुसी आएको छ । आमाले एक्लै हुर्काएकी थिइन् कञ्चनलाई । होसमा आएपछि पनि उनले प्रेमिकालाई नै याद गरेका छन् ।
छोराले भनेको कुरा आमाले रुँदै सुनाएकी छन् । उनले औषधी उपचारमा निकै धेरै पैसा खर्च भएको बताइन् । तर छोरालाई फर्काउन पाएकोमा भने उनी खुसी छन् । अझै कञ्चनलाई कति दिन अस्पतालमा राख्नुपर्छ भन्ने एकिन पनि भएको छैन ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
Prevकेहि दिन अघि पत्थरीको अप्रेसन पछी मृ,त्यु भएकी दीपा राईको गरियो आज पोष्टमार्टम र अन्त्येष्टी
Nextअब मरेका मान्छेलाई पनि पुनः जिउँदो बनाउन सकिने डाक्टरको दाबी
बलात्कृत अपांगलाई न्याय मुस्किल (1194)
जनता टाइम्सका संपादक शान्तिराम कार्कीको निधन (973)
मनमा अलिकती पनि दया माया भएआफ्नै दाजु भाइ सम्झेर RIP लेखी सेयर गर्दिनु होला।????भाइको आत्माले शान्ती पाउनेछ (718)
एम्बुलेन्स सञ्चालन भद्रगोल : निर्देशिका गज्जबको, कार्यान्वयन भेट्टाउनै गाह्रो ! (695)